Bayxu bayxi Malee Saree ija hin kuulan – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooBayxu bayxi Malee Saree ija hin kuulan
Dhugabaas irraa, Fulbaana 16, 2020
Maqaa Qabsoo Adda Bilisummaa Oromoo dandamachiisuuf jachuun faallaa sanii baasani nama tokko miseeensota ABO yakkuuf kashalabooni mooraa QBO fadhii mataa ofiif gurgachuuf ibsa baasan argee heduun isaanif salpahdhe – silaa isaan warra xiqqoollee qaanfatuu miti. Addi Bilisummaa Oromoo rakkoo kana hin jadhamne keessaa obsaa fi murannoon wareegama barbaachisu baasee kan as gahee tahuu beekkamaa dha. Wanni nama ajaa’ibu dhaabni otkko demokraatawaa kan taasisu heera ittiin bulu kan deemocraatawaa, sgantaa xallila’aa , tarsiimoo qabsoo ifaa fi beekamaa dabalees kaayyoo naamusaa ittiin masakamu yoo qabaate fi sana hujj irra oolche” jachuun haa jalqaban malee hamma amma arraa maalitti hundaawani akka qabsaawuun sadarkaa hogganuumaa gehan beekuun nama dhiba. Kun hundi jiraachuu isaa akka jedhaniitti yoo tahe ofumaaf waan itti hin amaniiin keessatti qabsaawaa of fakkeessaa akka turanii fi QBO itti amanani akka hin turre nama garsiisa. Hundaafu, qabxillee isaan tutuqan kan biro haa ilaallu:
Kaayyoo Namusaa ittiin Masakamu qabaachuu isa jedhu jalatti jattanif kaayyoo namuusaa sana didee kan waxifachaa jiru isin tahuu maaliif hin himne? Bara 2000 irraa eegalee adda bahiinsa ture jattani nama tokko ykn J. Dawud irratti maxxansuuf taataafachuu irratti Kaayoo eergama isaa ABOn maaliif sirnaan raawachu dhabee ja’ani namooni hedduun akka gaafataan himani bira kutuuf yaalan.
Akkattaa J. Dawd HD tahuu isaa yoo ibsan taateen kun bara 1999 tasuma akka raawwateetti bira dabaruu yaalan. Garuu tasa osoo hin taane Bakka Baydhawaa ja’aniin Somalia keessatti odeessa wayaaneen moraa leenjii fi WBO weeraruuf qophitti jiraachuu isii fi waraana daangaa irratti guurrachaa jiraachuun qabatamaan dhagahame hoggana Moqaadishu jirtutti (Galaasaa Faa) gabaasame, hanqina murti fi murti tokko godhani Waraani Bilisummaa Oromoo naannoo sana jiru nama ergate osoo duraa siqaa yookiin lolodhaa jechuun hoganni achii jiru murteessu dadhabuuraa kan WBOn hedduun wareegame. Bara sana haala gaaga’amni akkasii Dhaaba keenya irra ga’e keessatti isayyu otoo diduu dhiibbaan dirqama fudhatuu J. Dawuud akka isin jattan osoo hintahin HD taasifamu isaa kana beeytuu? Kanammoo dhoysuun duula maqa-xureessi isin ballinaan saganteeffattani itti bobbaatan kana waan isiin milkeessu waan isinitti fakkaateef dhuga kana himuuf qophii hin qabdan. sana isiniif guuta. Kora Sabaa isin jattan sana ammo Biyyatti yaamuuf murtaawe sana qopheesuu irratti Jaallan akka Aaneesoo Waaree wareegamu fi Somalia irraa bahuun korri san akka murtaaweetti yeroo jedhame sanatti yaamamuun hafee Asmaratti godaanamuun waan hundi keenya waliin beeknuu fi haalli gara Asmaratti nu godaansises balaa kallattii hundaan marfamuu jalaa bahuuf filannoon dhumaa nuti qabnu fii aanjaan yeroo sanatti jirus Asmara duwwaa ta’uu isaa hundi keenya dhibbaa dhibbatti itti amannee waan goone ta’u haaluu yaaltan. Kanaan wal qabatee battaluma Asmara dhaqameen bara 2000 keessa barreeffama “Agenda for peace” jedhu tokko sababa godhachuun hookkara eegaleen bara 2001 Dhaabni kun bakka lamatti achi bahuun qaamni “Koree Dandamachiistuu Kaayyoo ABO” jedhamee uumame Qaama Ceehumsa-ABO jechuun yeroo of labsetti haalli Kora Sabaa geggeessuu tasuma akka hin danda’amne waan hundi keenya waliin beeknuu fi itti amannees hojii Jaarmiyaa tiksuutti xiyyeeffanne ta’uus ni haaltan. As irratti yeroo sana Kaayyoo ABO ganamaa dandamachiisuu jechuun gartuun Hookkara uume adda durumaan kan hoogganamaa ture J/Galaasaa Dilbo kan murtee Walgahii GStiin J/Dawuudiin bakka buufame ta’uu Oromo maratu quba qaba. Dabalees hookkarri yeroo sanaa barreeffama “Agenda for peace” jedhu sababeeffatuun jalqabame kallattii dhaan kan barreesse Leencoo Lataa dha, innis ABO takaalee Itophiyatti deebisuun hawwi Itophiya dimokrateessu jedhu bakkan ga’achuuf kan jedhuun J/Dawudin inumayyu akka ergama Lencoo lataatti olola irratti oofuun eegale. Waan bara sanaa kanuman yoo gabaasine akka yeroo sanattis J. Daawud Ibsa HD tahuu isaatiin ABOn dandamate Kora Sabaatiin gahu isaatti utuu galateeffamuu qabuu cubbu Oromoon oole nama tokko irratti fe’uun dhukubsaata ta’u mullisa malee hanga isin itti duultan kana namni cubbama miti. J/Dawud fi hoogganni yeroo sanaa hundi keenya Dhaaba jireenyi isaatu shaksiisaa tahe dandamachiisne malee waan J/Dawuud addatti cubbuu fi yakka hojjetes hin turre, Mee yaadadha: Dhugaa himuu utuu feetani warri bara 2001 ABOn Kaayyoo ganamaa irraa maqe, Leencoo Lataa ABO hijack godhee Mallasaatti gurgurate, Dawuud Leencoo Lataa dhaaf karaa bane ABO biyyatti deebisuuf jedhani warri mudhii hidhatanii falmaa turan warri akka Galaasaa Dilboo bara 2018 yeroo biyyatti deebi’an akkas jedhan, “Nuti mootummaa kana gargaaruu dhufne malee loluu hin dhufne” jechuun Abiy jala galan. Kanneen akka Leenco erga formally ABO keessaa bara 2011 irraa kaasee ari’aman Hegereen Oromoo harka Abiy fi lama malee harka ABO hin jiru jechuun ifatti yeroo dubbatan madalli maaliitiin isaan fira ABO ta’anii Dawud Ibsaammoo diina ABO ta’a? Isa kana yaaduuf yeroo dhabdan moo sammuu dhabdan. Maanguddootni harra isin ibsa Hilton irratti ABOtti afeertan warra mootummaa Bilixignnaa gargaaruu kanneen akka Galasaa Dilboo, Leencoo Lataa, Dima Nagawoo fi fakkaatotni isaani Wagga 40 guutu warra numalee namni ABO hoogganuu hin danda’u jedhani hookkara uuma turani fi Umriinis (Galasa irran kan hafe) angafoota Dawuud ta’an utuu jirani maadallii maliitiin Dawud Ibsa cubbuu isin tarreessitan baata? Gaaffiin isiiniif dhihaatuu malu waan dhuma hin qabneefi isinii waliin atakaruun yeroo balleessu ta’a. Garuu cubbuu isin Dawud Ibsaa irra tuultani faalla isin xibaartani ta’uu isaa isinuu ifatti beektu. Kana jachuun akka keessanitti ABO gurgurachuu osoo hin tahini J/Dawuud IbsaaABO isa Oromoo dhugaa Oromoo baatee bu’a ba’ii baroota 27 keessa bahe sadarkaa kanaan gahee wagga lamaan Harra bifa Adunyaan dinqisiifateen Milionotatti fidee kenne. Isininis, keessummaa warra akka Qajeelaa Mardasaa, Toleeraa Adabaa fi Atoomsaaa Kumsaa J/Dawuud bakka kadhatuu kadhatee, ija halagaa ilaalee baroota 19f magaalaa Asmara keessaatti isin qallabaa ture malee madaalli kamiinuu ga’ummaa qabsaa’a tokkoo waan qabdaniif hin turre. Kana dagattani harka isin nyaachise ciniinuun utuu mataa qabaattani hirriba isin hin raffisu ture. Garuu isin namoota akkasi utuu hin taane namoota waan boor nyaatu duwwaa yaadu ta’uu keessanin qama PP jedhamu tuullaa hattootaa kan bor ofiifu itti fufee jiraachuuf abdi hin qabne jala seentani Duula nam-Tokke (HD) fakkeessuun QBO fi ABO irratti karra bantani diina itti naqxan. Mee kun waan dubbatamee dhumu waan hin taaneef dubbistoota koo gara duubaatti deebi’een waa qabsisa:
Jaarmayni 2001 Qaama Cahuumsaa jachuun kan gadi bahan amoo boodas waltahiinsi eerga tahee irra hedduun isaani dhaabatti deebi’an boodas gariin isaani akkuma aadeffatanitti deebi’ani of baasan. ABO akka moona loonitti lakkaawan jechuu dha. Namoota bifa Kanaan gaafa fedhan seenani gaafa fedhan bahan, namoota hirbuu Oromoo fi waligaltee Qabsaa’ota waliin taasisan hin kabajnee kana ilaalchisuun amma maal jachuu akka barbaadan ifaa miti. Moo J.Dawud tu baase jachuu barbaadan? Wal dhabii akkamtu akka uume hin ibsine. Garuu Obboo Galaasaan sababaa joolee dhumtetti arihamee dhiisaati onneetu na dhukuba jedhee xalayaa galfate deebi’ee Daud faan mootummaa Ethiopiati harka kennachuu ykn kaayyoo diigani deemuuf daamu jedhe “kaayyoo ganamaa” dharaan hafarsaa ture maa hin dubbanne? Seenaa namni beeku kan hin jirre isinitti fakkaate? Hundi keenya bara sanis waliin turre harras ni jirra.
Sana boodaas 2008 irratti “Koree Yeroo” jachuun warra akkuma keessanitti faallaa deemuun hoggana ariine jedhani gandummaa himachuun bahan tuqaa jirtuu gaafas isiniis warra arihame keessa turuu maaf hin ibsine? Hundaafu, isaaniis otuu itti hin milkaawin gariin dhaabuma keessaa baha dhiifama gaafatani yeroo deebi’an garin ODF tahuu isaani akka gaaritti beeytu. Bakka kanatti kan ifa ta’uu qabu yeroo ODF alatti uumame irraa eegalee Qajeelaa Mardaasaa miilla tokko ABO keessa kaayyatee dubbi himaa ODF ta’uun tajaajila yeroo kennaa turetti Dhaabni ifaa fi ifatti utuu beekuu mararfannoon hanga dhumaatti of keessatti hammatee turuun tarii badiin sun badii Dhaabicha malee badi Qajeela miti yoo jedhamne bakka harra geenye kanatti haaluun nu rakkisa. Gama biratiin yeroo itti gartuun “Jijjiirama” ofiin jedhee Hoogganummaa Kamal Galchuu fi Gorsa Leenco Baatii, Leencoo Lataa, Diima Nagawoo fi Hasan Huseeniin sirna Dhaaba ala of godhetti miseensi hooggana olaana Qaama” jijjiramaa/micciirama) Ibsa Nagawoo kan gara ABOtti dhufe erga gartuun kun diigamee gariin ODF, gariin isaanimmoo KWOtti galaniitii Ibsaan gartuu arcaatuu “Koree Yeroo Micciiramaa” jettuun bara 2014 haraara moora Oromoo keessatti ta’eeni. Hanga guyyaa sanaatti Ibsaan Miseensa ABO ta’ee guyyaa tokkollee jiraatee hin beeku. Addi Bilisummaa Oromoo bara 2014 haraara moora Oromoo keessatti milkeessuuf extra mile deemun miseensota Hooggana Koree yero jedhaman tayita gartuu arcaatuu sana keessatti qabaataa turan akkuma qabatanitti Hooggana ABOtti akka dabalaman taasifame. Kunis badii dhaabichaa kan faalla gartuun kun akka badiitti tarrisu keessaa isa tokko dha. Silaa ABOn diduuti itti ture malee nama akka Ibsaa nagawoo wagga 35 Torontoo jiraatee guyyaa tokkoofille Miseensa ABO seera qabeessa ta’ee hin jiraatiin sadarka Shanee Gumii ABOtti fudhachuun itti hin turre. Gartuun kun obsaa fi haa haafuu Dawuud Ibsaa isaaniif qabaachaa tureef galata jechuu irra cubbamaa fakkeessanii yakka PPn itti isa yakkuuf waggoota lameen kana asiif achi jechaa turte compile godhani Abiyyiif kennan. Safuu, yaa aqli dhabu!!
Fofotoquu jattani kannen danta adda addaatiif akkasumas dheerachuu qabsoo irraan kan madden Dhabarraa bahani deeman dhaadheesu keessan dura maal jachaa akka turtan yaadadhaa, Asirratti Qajeelaa Mardaasaa faan sabaa J. Dawud malee miseensi hedduun akka inni ODF dhaaf dhaaba basaaa ture akkuma asin olitti tarrifametti qabatamaan ni beekan turan. Booda garuu GS irratti Qeeqaan akka irra darbamu tahe – yoo barbaadan isinitti himama. Haala yeroo sana ture irratti waltahiinsi akka hin milkoofne kan godhe J. Daawud isin jattan ammo Dhaba kana keessatti miseensooni ABO akka Dhaabni kun hin facaaneef jecha diinatti hin gallee warren dandamachiisan keessa J. Dawuud nama tokko akka ture keessi keessan dabrees warrenuma isin amma jattan kana gaafachuu numa dandeessu.
Kan biraa isin irraa kan hin malle maallaqa dhaabaa akka waan dhuunfaatti itti dhimma bahuu kan jattanii yakkuuf yaaltani dha. Dhugaa dubbachuuf Qajeelaa faan cidha Eritrea keessatti namninuu dinqisifateen nama fuudhe dha. Amma nama biro yakka J. Daawud namuma akka keessanitti baajeta Dhaabaan kennamuufiin dokkee nyaacha tureefi jiru tahuu irraanfattanittu!! Yoo namaaf darbu akkas nama maraacha. J. Atoomsaan alatti bilbilchee horii ergisiifachaa fi nama waraanaaf jedhame horii itti eegamu firaaf eergisisaa nama turee fi gaafatamnaan nan ganame nama jedhe sadoo isaaf dubartii Oromootti nama tapatu tahuun nama beekkamu dha. Nama irratti quba laachuun salphaa akkuma tahetti badii isin balleesitan akka qeeqaan isinirra darbammu gochuun achitti yakki isinin irra tultan kun akka hin jirre takko tokkoon keessan waan hojjattan isiniif tarrisuu ni dandeenya. Walumaan turre mitiire?? Garuu akka keessanitti nama safuu hin qabnee miti,
Kan birraa ganoota 21 HD tahuu issatti bu’aan busee akka hin jirre himtan. Ajaa’iba Ganoota kana keessatti bu’aan qabsoo inni hogganuu biyyatti isin galchee akka jiru ni irranfattani? Yeroo Dawuud Ibsaa bifa Kanaan yakkitan, Oromoo miti Amaarri inni lafarraa isa jibuyyu hin fudhatu. Gooftoliin keessan warri isiniin qabatani QBO balleessuu irratti projekti kana geggeessan kanneen akka AbiyAhmed, Dammaqaa Mokkonon, Alamu Sime fi Tayyee Danda’a faatinu keessa isaani keessatti isin irraa hin fudhatan. Inumayyu faalla yakka isin tarreessitani Dawud mallattoo cichoominaa waan ta’eef yoo isa karaa irra maqsine duwwaa ABO lamshessuu dandeenya jechuun akka meeshaatti barbaadani isin argatan.
Qabsaawota karaa adda addan hojjatani qajeelfama isaanin dhaaba kana asiin gahan malee waan isiin hojjanne jattan himaa mee? Obsaa fi muranoon qabsoofne biyyatti galtanii amma PP dhaan gargaaramtani kaayoo Qabsoon tun kumaatama itti wareegde gurguruu yaaluun keessan harras tahuu boru dhalooni akka dhiifama isiniif hin goone keessi keessan isinitti himeera. Kanaaf akka saree maraatuu taatu.
Kan nama ajaa’ibu biron wa’ee beektootaa laalchise waan isin xibaartan akka tahe argeen jira. Tartiibaan alatti caasaan irra tarkaanfatame kami? Moo isintu beektootaa fi hayoota tahe. Caasaa dhaabaa beeytani? Caasaa dhooksaa kan hogganni waloo hin beeyne hunda ofitti hidhe hojjata kan jattan yoo akkas tahe Kora sabaa irratti maalif filtan? Warri 2017 Kora godhame irratti harka baaseef keessa jirachuu keessan galmeetu hima. Meek un hin taane waan biro, waan Tayye Danda’a isiniif barreesu fida. Namoonni akka keessani waan Ummata Oromoo balla amansiisee isin jala hiriirsu gad baaftuu jennee yaadnees hin beeknu, hin yaadnus. Sababiin isaa hangam akka geessan sirriitti isin beekna. Ta’us akka nama afanfaajeessuf yaaltan himuun barbaachisaa waan ta’eef jecha. Namni kijiba irratti hundaawe tokko jalqabumma irra bacancaraa waan taheef dhugaan isin irra hin eeggamu.
Caasaa biyya keessa hedduun hoganni biraa kakka keessa hin seene ykn nama ganda isaan akka dhuunfatamu godha kan jattan dhugaa taanaan gandi kun kami? Kilomeetra meeqaan lakkaawama? Lafti Dhalootaa Dawud fi Qajeelaa hangam wali irraa fagaata? Lafti dhalootaa Toleeraa fi Dawud hangam wal irra fagaata? Maadalliin gandumma Kilomeetra meeqaan lakkawwama? Dangaan oromiya karaa Dhihaa Sudan irra eegale hanga bahaatti Somalia dhan daangeffamu kana keessatti madaalliin isin gandummaa ittiin safartan maali dha? Waan keessan dubbatamee hin dhumuum. Maal qaba yakka birallee yoo irra tuultan? moo yakkatu isin jalaa dhume? Sobni hin dhumuum, Itti fufa hanga sobuu nuffitanitti.
Kan tikka wayyannee jataniin ammo kami? Akkuma isinuu ofitti dhugoomsitan Nuti isinuma shakkaa turrem. Amma isinuu raga ofitti baatani, galatooma!! Warra J. Dawud jaare kan Geetachew Asefa waliin hidhata qaban jattan yoo isnuma tahe malee hariiroon J/Dawud fi kan Getaachoo Asaffaas, kan ABO fi kan TPLFs hariiroo diinummaa kan qawween wal lolaa turame dha. Harra haala nagana hojjennu keessatti qama kamiinu diina hin jennu, garuu hariiro firumma takkallee akka hin qabne isinumti kaaraa gooftolii keessani Getaacho Asaffa gaafachiisadha.
Girmaa Xurunaa geetachew Asefa waliin wal quba qabaachuun double agent tahee namni tokko hojjachuun ABO ti hin jalqabamne. Warra isin amma itti galtana pp qulqulluu akka hin taane beekama tahee osoo jirtu waan rakisha akkanaa kana deemuun keessan heddu dinqisiifamaa dha. Basaasa ofi basaasa diina keessa seensifachuun waan dinqisiisamu malee waan isin bifa rakasha Kanaan akka yakkaatti dhiheessitan miti. Gooftan keessan inni amma isin bobbaase Abiy Ahmed yero INSA keessa ture akka J/Dawudiin Asmaratti qunnamaa ture TV Itophiya irratti ifaan dubbatee tureem, irraanfattanii utuu hin beekiin goofta keessan akka hin yakkne. Wa’a!! J/Dawudis wa’e qunnamtii kana ifatti dubbateeraam, wa’ee J/Laggasaa Wagiif Abiy Dawuudtti bilbiluu isaa J/Dawuud hin haallewoo, maal kan icita fakkeessitanii akka yakkaatti tarreessitu? Maal akka isaan haasawan Gooftaa keessan gaafadha. Waan biyyi guutu bara darbe keessa baatii tokkoo oliif haasawe irranfattani waan iciiti baastan isinitti fakkaate, kkkkkk…. Dhugaa qabduu waan booru nyaattan duwwaaf waan yaaddoftaniif dhimmoota akkasii yaadachuuf sammuun keessan guutameera.
Hoganoota dhaabaa ol aanoo HD bobaase WBO ti dabalaman eenya faadha? WBO ti dabalamuu enyuyyu qajeelfama HD akka hin gaafatne hin beeytani? Miseenoni ABO gariin haala jiru irraa kan ka’e waraana malee kan nu baasu hin jiru jachuun miseensumaa dhiisuu issani hin baaytan? HDn ifatti WBO waliin hariiroos abboommiis akka hin qabne bakka qaamni mootumma jirutti Ummata Itoophiya duratti TVn dubbatuu isaa irraanfattani? Isa kana isin caala Abiyitu beeka waan ta’eef Kanaan HD yakkuu yaluun keessan amanamumma Tayyee Danda’a fa isin irratti uummatu mala nisin jala gad buusaati of eeggadha, tolee?? Garuu maal goona akka miseensatti waan pp keessa deemaa malee miseensa keesa deemaa jiru hin beeytanuu! Jachii kaani ammo waan Taayee dandaa’aa jedhuun alaa miti. Qabsoo nagayaa goona jedhanii kanneen galan maal irra akka jiran beekuun abdii nama heduu kutachiisu bira dabree WBO deegarutti tarkaanfachisee jiraachu gooftoliin keessanuu isin caala beeku. Caasa tika isaani kan hoogganuu fi guyyu gabaasa argatu isaani. Isin hin dhama’iina. Nama akka keessanitti nagaan qabsaawaa jiru irratti yakka tarrisuun isin hin baasu Oromoon dhugaa isaa eerga hunbate tureeti jira, yeroo keessan waan biraatiif itti fayyadama.
Miseensoonni Olola FB irratti olola warra PP waliin ykn mootummaa deegaran irratti ofan kan jattan amoo kun oloola osoo hin tahin dhugaa himani nu saaxilanti wayeefadhaa.
Kora Sabaa maleemalee kan HD jijjiiruu ykn kaasuu dandayu akka hinjirre
Osoo beeytanu fonqolcha daa’imaa isiin oftan kana Miseensi, deegaraa if walumaa galatti Ummanni Oromoo akka hin fudhanne haala Ummatni Oromoo alaa fi keessan isin balfataa jiruu yoo akkumma amala keessani ija qabattan malee dhugaan maal akka fakkaatu mirkaneeffattaniittu. Mee yoo qalbii keessanitti deebitan koruma sbaa muddee 2020 sanitt beelamamee maaliif hin eeynee akka sun hin taaneef shira kanaan dhuftan? J. Daawud irratti haqachuuf jeequumsa uumuun seeraa fi sirna Dhaaba ala deemaa jira jattan? Kan ofii itti jirtan maal jedhama? Moo akka isin hin filamne beeytan? Waan korri sabaa barbaachisuuf waan hin beeyne fakkaata nuf himuu dhiisaati ofumaa baradhaa.
Kan biraa kan Ibsa jattani barruu bacancaraa keessan irratti isin kaftan Dhimma jaarmayoota ABO turaniti. Amma dhugaa dubbachuuf dhaabonni kun duraanu ABO diiguuf warra hojjachaa turan tahuu bira taraani ammas PP tahuun kanneen sadarkaa adda daadtii hojjachaa jiranii dha. Hailu Gonfa namni miilla tokkoon PP keessa, miilla tokkoonimmo ABO-T keessatti bakka lachuuttu qama hoogganaa ta’e isin bira maal fuudha? Namni J/Abdi fa hiisisee hiraarsisaa jiru Hailuun cubbuu isaa isinitti haqachuuf dhufee isinimmo J/Dawud tti haquuf rakkattu? Diima Nagawoo kan bara 2013 yeroo ODF dhalatee “ABO tu ODFtti jijjiramee, ABOn du’eera” jedhe bara sana labse bifa kamiin ABO isin waliin ooftani asiin geessanitti mataa ta’a? Sila kan isiniif maluu Kanneen akkasi akka ABO infiltrate hin goone eeggachuun ture. Erga isin dhiistaniis kun diraqama miseensoota ABO ti. Kun hujjii HD qofa akka hin taane beeku qabdan. QBO kaayyoo qabdi kuniis akka barbaadanitti kan irra daldaalani miti. Dhageettii fi kabajaa ABO qabuu kan ummanni akka tufattu goosise warra akka keesani kanaan yoo tahe male ABO ammalle dhugaan isaa beekkamee jaalala horachaa jira. Kana ammo isin ummata keessa waan tufamtaniif beeku hin dandeessan– numa xibaaraa dandeetiin keesan tanuma.
HD ganoota 21 tookof bulchuu isaaf hogannumaa irra kaasuun Mirga koree Hujjii Rawwachiiftu tahu issaa Heera isin tumtan irratti gartani? 2017 kora tahe irratti quba baaftani filuun achtti xiqaatu maaliif gannoota HDn tokko itti bulchuu dandayu hin murteesin? Yeroos HD taana seetani??
Maqaafi qabeenya dhaabaa laalchisee heeraa fi seera itti taligamu waan qabuuf akka bartanitti hatuuf yoo hin tahini kan miseensootati. Qabeenyi isin ittiin bara 19 jiraattanis kan miseensi keenyaa alarra afaan ilmaan isaarra dabarsee qabsoof isin jiraachisuuf gumaache dha male isin gatii saantiimi tokkoollee hin baaftan.Ammammo miseensooni GS isinin akka miseensatti isin rarraasani waan jiraniif murtii KNT eegadhaaa. PPn waan ABO hin uuminiif ABO balleessuu hin dandeessu, isin hin baaftu. ABOn kan Oromooti!! Tikni ykn waraani mootummaa namoottaan dhuunfaa miseensa hoogganaa ta’an doorsisuu malee miseensumaa keesan bakkati hin deebisu _ dhunmate.
ABO hogganummaa waloo kan jattan qofaatu dhugaa qaba. Kanaaf, namnooni afuriifi sadii tani nuutu dhaaba jachuun wixiifattan jacha keesanirraa baradhaa.
Tarsimoo Qabsoo karaa nagaa isin jattan kuni yoo PP galuu tahe malee ABO waan hayyooni irratti marihatani Dabni aopt godhe qaba. Achuma turtanii miti gaafas? Moo yeroo sanitti mugaa turtan? Osoodhuma biyyatti hin galiin beeytotaa fi hayooni qormaata isaani Asmara dhufani Qormaata dhiheesuun san boodaas heduun isaani karaa adda addan dhiheessa turan, jirus. Mee isin hayoota kana hin beeytani ykn achi hin ture? Moo akkuma Mallasaan jedhee hallu isaani hin jaallanne? Jireenyi jaraa jibbaa fi jaalala keessan irratti hin ghundaa’uuti afuurfadha.
Gantuuf diina kan isiniin ja’u waan isin godhaa jirtan. Heeraan ala deemu keessanifi mootumma gargaarsifatanni waan gochaa jirtani dha. Hunda caalaa qabsaawoota qabsiisu dabalate,. Kanaaf, ee isin gantootaa fi diina QBOtti. Amalle dararaa fi hidhaa Jaallan keenyarra ga’aa jiruuf gatiitti keessan irra hin buunu. Hanga lubbuun jirtanitti dhalootni kun gatii isin baasisuuf jecha isin hordofa. PPn golgaa isiniif kannuuf hin deemtu.
Murtiilee GS bitooteesa, 2020 dabarsee jattan ammo kan isinummaan bocoltan sani moo kan birooti. Miseensota GS meeqaatu isin biratti walgahii keessanirratti argame? Meeqaatu isinirratti labsa baase, meeqaatu waan isin deemtaniif dura dhaabate? HD laalchisee sagaleen kenname jiraa? Namoota hin baayneef himaa. Oromoon shira keessani fi shira Mootumaa Ethiopia (PP) akka gaaritti baree jira.
Karaa birootiin Qajeelfama PPn isiniif kennite hujjiira oolchuuf waan PPn ABO fi TPLF walitti hidhuuf xibaartu hojjiira oolchuuf wanni isin TPLF fi ABO walitti hidhuuf jattan hin hojjattu ABO fi TPLF jiddu lola baroota meeqatam lakoofsise malee wanni biro hin jiru. Ummanni Oromoo waan TPLF irratti hojjatte akka gaaritti beeka ABOnis akkasuma. Mootummaan ashkarummaa TPLF jalaan nama keenya fixaa turte ABO fi TPLF walitti hidhuuf itti hin milkoofne isin ammo waan biroo barbaadadha.
Adeemsi Karaa Malee Furmaatatti Geessuu Hin Danda’u Waliigaltee ABO, Mootummaa Itoophiyaa fi Mootummaa Naannoo Oromiyaa…
Qeerroon Nii Fincila Malee Gaaffii Hin Gaafatu
Qeerroon Bilisummaa Oromoo Mootummaa Gabroomfataa Nii Fincila Malee Gaaffii Hin Gaafatu. Caamsaa 23, 2020 Jaarmayaan…
Nami Qajeelaa iedhan kun duraa eegalee Leencoo Lataa akka waaqaatti itti sagada jechaa turan qabsaayoti. Rakkoo takka harrtuun tun ammaan tana teeysaa ruuqamte kana boodas Leenco fi gareen isaa akka Diimaafa, kanneen mullata (vision), muratnoo, dandeettii geggysumma fi tarsiimoo waan hin qabneef dhaaba ODF jedhamu jaaranii matuam isaaniin diigan kun ABOs diiguuf yaalii gannoota hedduuf ifaajaa turan bikkaan ga”uf harka keeysaa qabu jedhamee hubatama. Jarti Leencoofa tun maqaa ifirra tuulanii mandhee beektota Oromoo if tolchan taatus, beekomsi jaraa dhaaba takkallee jaaranii tursuu dhabuun diiganii seenaa qabsoo Oromoo teysatti ka bakka qbatudha. Beekomsa gatii dhabde, kan akka ifaa gaanii keeysaa. Dotora meeqatu tureyii ODF keeysa? Doftorri dilli sun maquma fi oduu ture motii? Kanneen qabsoo oromotti tabatan, beekaa wollalaa. Hanga zaaa kanatti qabsoo oromoo baleysuuf ciisa hin argatani.
Baqxu Baqxi Malee Saree Ija Hin Dhiqan makmaaksi jedhu makmaaksa ummata keenyaa osoo hin taane hiikkaa afaan biraa ti.
Lubuu merga says:
Many merchants buy cattles by traveling in the middle of nowhere bringing cattles to town market selling them for profit.
Many merchants by traveling in the middle of nowhere buy crops from farmers to bring the crops to town markets selling them for profit.
Now due to this bank note changing rule the traveling merchants have to convert the birr notes they have on hand by depositing the cash into bank accounts , meaning their cash on hand will be tied up in the bank for quiet sometime until this merchants feel safe enough to withdraw the cash. Of course for safety reasons traveling merchants will deposit their cash in the banks and refrain from taking the money out all at once right away because in a country where more than 30 banks got robbed the bank customers will not feel safe going in with the old cash notes and come out with the brand new cash loads . This inturn might bring disruption in agricultural product availability at local markets creating soaring prices in food items and add millions of people to the already 15 million Ethiopian people who need emergency urgent food assistance in Ethiopia.
Local police is given permission to take above a certain amount cash money they find to curb cash hoarding . The cash the police finds being hoarded the police are given license to keep it for themselves meaning many traveling merchants are currently afraid they will be robbed of their cash by the dirty police officers who might rob two hundred thousand birrs from ten separate traveling merchants each then the police can simply claim they found two million on hand of just one merchant hoarding two million while the truth was they robbed ten merchants two hundred thousand dollars each, the current limit if cash to have on hand is $1.5 million birrs and if police finds more cash than $1.5 birrs on hand the police is given permission to confiscate and keep the money according to the new rule.